Yunaayitid Isteetis Waliigalteelee Dahata Kenninsaa Biyyoota Eddu-gala Ameerikaa Rarraaste
Yunaayitid Isteetis Waliigalteelee Wal-gargaarsa Dahata kenninsaa ammaan dura mootummoota El Saalvaaadoor, Guwaatimaalaa fi Hunduraas waliin mallatteessaman yeroof rarraasuudhaan, deemsa itti waliigalteeleen kun haqaman jalqabdee jirti. Kun immoo akka karoora prezidaanti Baayiden Baasanitti, biyyoota kanneen naannoo sanaa waliin michoomaa fi wal-gargaarsa caalaatti deemuuf tarkaanfii isa duraa ti.
Waliigalteen bara 2019, Guwaatimaalaa waliin mallatteessamee ture Yunaayitid Isteetis namoota Saalvaadoor fi Hunduraas irraa dahata barbaacha daangaa Kibbaa Yunaayitid Isteetis qaxxaamuruun biyyattii seenan , dura gara akka Guwaatimaalaatti ergitu mirga kennaaf. Hojii irra hin oolfamne malee Hundraasii fi Saalvaadoor waliinis waliigaltee wal-fakkaataa mallatteessitee turte, Yunaayitid Isteetis.
Ajajni hooggansa ol’aanaa Yunaayitid Isteetis, prezidaant Baayideeniin Guraandhala 2 kenname kun caasaa biyyoota naannoo hunda-galeessa rakkoolee godaansaa Ameerikaa Kaabaa fi Giddu-galaa keessa jiruuf furmaata barbaaduu fi godaansicha to’achuun, akkaataa karaa nagaa fi sirna qabeessaan namoonni dahata barbaadan daangaa Yunaayitid Isteetis irratti dahata gaafachuu danda’an kan haala miijessu.
Ministarri Dhimma-alaa Yunaayitid Isteetis, Antonii Bilinken ibsa kennaniin, “tarkaanfiin amma fudhanne kun namoota daangaa qaxxaamuraniif banaa taha, jechuu akka hin ta’iin hubatamuu qaba. Daandii karaa seera-qabeessaa fi eegumsa qabuun dahata gaafatan bal’isuu fi carraa kennuutti ennaa asii cichinee jirrutti, naannoo kana keessatti, Yunaayitid Isteetis biyya daangaa qabduu fi seera hojii irra oolfamuu qabu lafaa qabdu tahuun beekamuu qaba,” jedhan. Itti fufuudhaanis, “kanneen gara daangaa keenyaa dhufanii maraaf karaa sirna qabeessaa fi eegumsa qabuun dhimma isaanii raaw’achuufiitti ennaa cichinee jirrutti, warri karaa seeraa-alaa godaanuuf yeroo mara yaalan, imala bal’amaa sana keessatti mataa isaanii fi maatiilee isaanii balaa irra buusu,” jedhan.
Mootummaan Baayiden, mootummoota biyyoota wahilootaa naannoo jiran wajjiin hojjechuudhaan karaawwan itti godaansa naannoo kana jiru to’achuu fi sirna qabsiisuun danda’amu ni jira, amantaa jedhu qaba. Yunaayitid Isteetis hariiroo gaarii mootummoota biyyoota kanaa qabdu cimsuudhaan akka mootummoonni rakkoolee humnaan buqqisuutti furmaata barbaadan otuu dhiibbaa irra hin kaa’iin gargaaruuf jirti. Keessumaa yeroo isaan dhukkuba COVID 19n rakkataa jiran kanatti.
Akkaataan deemsa keenyaa, karaa michoota keenya gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa caasaa eegumsaa fi furmaata kennuu kan hunda hirmaachisu keessatti deggersa gochuu dhaa, jedhan – Bilinken. Yunaayitid Isteetis, Nageenya baqqattootaa eeguuf dirqama jiru kabajuu fi biyyoota waahiloota ishee waliin tahuudhaan akka uummatoota fi hawaasaalee biyyoota naannootiif carraan banamuu fi gara badhaadhinaa guddatan gargaaruu dabalatee sababaalee bu’uraa humnaan buqqisuu fi godaansa sirnaa alaa hordofsiisan furuutti cichitee hojjetti – jechuun gulaalaan har’aa ibsa isaa xumura.